Amagqibela kankqoyi e-Inspired 2009-Geofumadas
Ndimenyiwe ukuba ndizokumema umcimbi kaCharlotte, nalapho kuzakuthi kunikezelwe ezona projekthi zibalulekileyo kwezintsha ngo-2009, ezazisaziwa ngokuba zii-Be Awards, ngoku ziphefumlelwe. bucala ngasekhohlo iya kwenziwa ukusuka kwi-12 ukuya kwi-14 ngo-Oktobha.
Kwiindidi ze-17 Ndiyakhathalela kwi-Cadastral kunye nendawo yokuphuhliswa kwendawo, apho abagqityiweyo baqeshwe khona:
1 I-SIG yeCáceres, eSpeyin.
Oku kuphuhliso lwe-GIS, kwiBhunga leSixeko Cáceres, ezibandakanya ukuthunyelwa kwi-Intanethi ngeGeebeb Publisher. Inkqubo iqulethe ngaphezulu kwe-200,00, iirekhodi, malunga neemephu ezingama-500, kwiprojekthi yeJografi ebandakanya iindidi ezingama-30 kunye neempawu ezingaphezulu kwama-300.
2 Umasipala weTel, eNetherlands
Olu phuhliso lubandakanya ukulungelelaniswa kweFlexiWeb, esisicelo sabucala esenza ukuba ukuthunyelwa koMshicileli weGeoweb kubenomtsalane ngakumbi. Ngaphandle kwedatha yendawo, ikwabandakanya amaxwebhu, iifoto kunye nembono ye-360-degree.
3 Isikhululo somlilo se-29, eCalifornia
Lo ngumsi omkhulu, ukudibanisa uyilo lwe-hydraulic kunye nezicelo ezahlukeneyo kubandakanya i-CivilStorm kunye neTransoft's AutoTurn. Olu phuhliso lubandakanya usetyenziso nge-pdf ye-3D, kunye nemodeli yendawo yedijithali ehlengahlengiswe kwiGoogle Earth kunye noyilo lweSketchup!
Apha ndiza kufutshane ngokugqitywa kwamagqabantshintshi kwezinye iindidi, ngelizwe (iindidi ezininzi zibandakanya ngaphezulu kweyodwa yokugqibela kwi-United States):
Bridges E-Australia, eMelika, eVietnam
Izakhiwo EUnited Kingdom, eU.SA,
cadastre ESpain, eHolland, eU.SA
Campus kunye neenqwelo zeenqwelo EU.SA, eIndiya
Zonxibelelwano amanethiwekhi USA, Czech Republic
Imayini kunye nezitye EMzantsi Afrika, eMadagascar, e-Australia
Ioli kunye negesi ENew Guinea, eU.SA, eUkraine,
Isizukulwana samandla EBelgium, eSpeyin, eU.SA
Izithuthi kunye neetreni Holland, United Kingdom, eUnited States, eSweden
Iindlela E-Australia, eU.SA, eIndiya
Izixhobo Jamani, eU.SA, eTurkey
Iimodeli ze-Hydraulic United Kingdom, USA, Australia
Iinkqubo ze-Hydrosanitary ETurkey, ePhilippines, eIndiya
Bonisa EU.SA, eUnited Kingdom
Umsebenzi weqela United Kingdom, USA, eBrazil
Uyilo lokuvelisa Ukraine, United Kingdom, India
Ubunjineli bezakhiwo EUnited Kingdom, Korea, eU.SA